भ्रामक सूचनाको पछि दौड्दा नराम्रो गरी थला पार्न सक्छ | Ekhabar Nepal
भ्रामक सूचनाको पछि दौड्दा नराम्रो गरी थला पार्न सक्छ
समाज भाद्र १४ 2077 ekhabarnepal
अहिले वजारमा कोरोना केही हैन भनेर मास्कसमेत नलगाउन सार्वजनिक आहृान गरिएका सन्देश पढ्न पाइन्छ । ती सन्देशमा भनिएको हुन्छ—विरामी हुँदा भ्याक्सिन हुन्न । भेन्टिलेटरमा लगे पनि औषधि छैन । कुनै उपचार पद्वति छैन । माक्स लगाउँदा १०० प्रतिशत सुरक्षित छैन । यस्तै हो भने पोजेटिभ र नेगेटिभको के अर्थ ? अर्थात् किन परीक्षण गर्ने ? किन घर वस्ने ? यस्तै यस्तै कुराहरु प्रससतै आएका छन् । सम्भवतः यसो भन्नेहर आफैमा सुरक्षित वसेका पनि होलान् । आफु सुरक्षित वस्ने अरुलाई नानाथरीका कुरा गरेर उत्तेजित वनाउँदा के होला ?
निश्चयनै कतिपय कुरामा असहमति राख्न सकिन्छ । तर, सम्पूर्ण रुपले गलत भनेर प्रचार गर्दा त्यसले निम्तिने भयावह अवस्थाको जिम्मेवार को होला ? अलि वढी आतंक सृजना भएकै छ । यो महसूस धेरैको छ । आतंक कुन अर्थमा भने समाजमा संक्रमित र मृत्यु हुनेको तथ्यांक सुनाएर वा पढाएर सनसनी मच्चिएको छ ।
विरामी विभिन्न कारणले मरिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा अरु रोगलेभन्दा थोरैको मृत्युपनि भएकै होला । औषधि केही गर्दैन भन्ने कुरामा आंशिक सत्य पनि होला । तर, मास्कले संक्रमित संख्या घटाएको छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ।
आश्चर्यको कुरा के हो भने सामान्य वेसारपानी, हाम्रै घरवरपर पाइने जडिवुटीवाट निको हुने रोगको औषधि किन पत्ता लाग्दैन ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले यीनै जडिवुटीको अनुसन्धान किन गर्दैन ? सेनिटाइजरले मर्ने भाइरसलाई मार्ने औषधि किन पत्ता लाग्दैन ? सुनिए अनुसार ८० प्रतिशत चिनियाँहरु परम्परागत औषधिवाटै निको भएका छन् । त्यस अर्थमा हाम्रा नीतिनिर्माताहरुले पनि यस विषयलाई अनुसन्धानको विषय वनाउन् भनेर जनमत वनाउन पनि सकिएला । यद्यपि अनुसन्धान भइरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइरहेकै छ । कुरा यति हो कि परिणाम आजको भोलि आउँदैन । आउँदो हो त सारा विश्व यति विधि आतंकित किन हुन्थ्यो र ?
चिनियाँ भाइरस भनेर तल्लोस्तरको गाली गलौजमा उत्रने अमेरिकालेनै औषधि किन पत्ता लगाउन सक्दैन ? सजिलो गरी हुने भए उसले चाइनालाई देखाइदिन भएपनि औषधि पत्ता लगाइसक्ने थियो । त्यसैले यो केही हैन भनेर प्रचार गर्दा यसले घातक अवस्था ल्याउन सक्छ ।
यसैवीच डा. केआई सिंहले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ— कोरोना कुनै भ्रम होइन, सबै सचेत र सजग वनौ ! सामाजिक दुरि राखौ , हात धोऔ, मास्क अनिवार्य लगाऊ ! समाजप्रति उत्तरदायी वनौ !
त्यस्तै डा. शागर न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चिकित्सकीय ज्ञान नभएका वा नभोगेकाहरुलाई सुझाव दिदै एक स्टाटस लेखेर भन्नुभएको छ—
आफू उमेर नढल्केका हुनाले पूर्ण स्वस्थ्य छु, यो कोरोनावाट कोही डराउनुपर्दैन, म निषेधाज्ञालाई मान्दै मान्दिन,कोरोनाको मृत्युदर संक्रामक रोगहरुमध्ये अत्यन्त न्यून छ आदि जस्ता परिवार र समुदायप्रति गैर जिम्मेवारपूर्ण र दिग्भ्रमित गर्ने आफ्ना वा अरुका विचार प्रवाह नगर्न विशेष अनुरोध गर्दछु ।
यो भनाईसंग किन पनि पूर्ण सहमत हुनुपर्छ भने नेपालको अहिलको तथ्यांकले भन्छ युवाहरु वढी संक्रमित छन् । किन ? चलायमान धेरै भएरै त होला ? हेलचेक्राइ गरेरै त होला ? केही हुन्न भन्ने भ्रम भएरै त होला ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा एकै जनाले आठ दश जनालाई पनि प्रभाव पारेकै छ । परिवारमा एकजनालाई देखिएपछि सवै जनालाई सारेको पनि छ । आखिरी किन ?
त्यसैले भावनाका कुरा गरेर मान्छेको मन जित्ने कुरा मात्र नगरौं । यसले गरिव धनी केही भनेको छैन । सुरक्षित वस्नेलाई छोएको छैन । मास्क लगाउने र कहीँ जान परे आफ्नै गाडी प्रयोग गर्नेलाई छोएको छैन । घरमै वसेर पनि प्रतिरोधात्मक क्षमता वढाउनेलाई पनि छाएको छैन । यसो भनेर युवालाई किन भनेर नभनौं । किनकि हरेक युवाहरुमा प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ भनेर पनि विश्वास नगरौं । बरु हरेकको पछाडि केही छ कि भनेर खोज गरौं । सानो जिज्ञासा वा खोजले पनि ठूलै परिणाम दिन सक्छ । हरेकले आत्म समिक्षा गर्दै आफू, आफ्नो छिमकी, नातागोता वा इष्टमित्रको पनि संक्रमित छ भने त्यसको मसिनो गरी अध्ययन गरौं । के खायौं र खुवायौं ? त्यसले कस्तो प्रभाव पार्यो ? वरु त्यसलाई सार्वजनिक गरौं । जसवाट अरुका लागि सिकाई हुन्छ र यसो भयो भने एउटा टुंगोमा पुग्न पनि सकिन्छ ।
हामीले नभुलौं सवैजनाको एउटै प्रकारको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि हुन्न । त्यसैले जो कमजोर छ उसैलाई यसले आक्रमण गर्छ । फलानालाई केही भएन ढिस्कानालाई केही भएन भनेर जवर्जस्त गर्दा परिवारभित्रै पहिलो असर हुन पुग्छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको चलखेल अवश्यै छ । उनीहरु नाफाखोर हुन् भन्नेमा शंका छैन । अरवौं रुपैयाको ब्यापार गर्न अग्रिम भुक्तानी भएका पनि छन् । अन्ततः पूजिवादले गर्ने यस्तै हो । तर, यसभित्र केही छैन र हैन भनेर लापरवाह िगर्ने वेला हैन । भ्रामक सूचनाको पछि लागेर दौड्दा त्यसले नराम्रो गरी थला पार्न सक्छ । यसमा सचेत् हुनैपर्छ ।
बरु हाम्रा चिकित्सकहरुलाई विनम्र अनुरोध के छ भने सवै कुरामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछि नदौडेर वैकल्पिक उपचार पद्वतिको रुपमा आयुर्वेद वा प्रकृतिक चिकित्सावाट देखिएका सकारात्मक परिणामलाई सकेसम्म आत्मसात गरौं । विरामीलाई ठिक हुन्छ भने अरु कुरा पछि गरौंला । भरसक विरामी गंभीर नहुँदै त्यस्ता उपचार गर्नेतर्फ लागौं ।